ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေ: ပုလဲရွှေအိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
ASIA GREAT LAND
HEIN KHANT MOE
MYANMAR TOP STAR
အမှတ်(၁၀၀)၊ ၁၂- လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
ဖုန်း=0950 81460 – 01.226255 ။ Email;/pearlshwe.sl@gmail.com
တစ်ခါဆက်ဆံ ရာသက်ပန် တစ်ကြိမ်သာဆက်ဆံကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်သက်လုံးစိတ်ချမ်းသာသွားစေရမည်။
လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော Hotel,Inn များ ၀ယ်လို/ ငှားလို ပါသည်။ ပိုင်ရှင်များ အမြန်ဆက်သွယ်ကြပါ။ (ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ ညောင်ဦး(ပုဂံ)၊ မန္တလေး၊ ရှမ်းပြည် (ကလော၊ မေမြို့၊ အောင်ပန်း၊ တောင်ကြီး၊ အင်းလေး)၊ ပုသိမ်- ငွေဆောင်၊ ချောင်းသာ၊ ကမ်းခြေများ။
(က) အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု လူမှုရေးစာချုပ်စာတမ်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်း၊ ဂရံကိစ္စများ၊ အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းကိစ္စများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပါသည်။ (Law & Consultant)
(ခ) Hotel, Inn (ဟော်တယ်၊ တည်းခိုခန်း) တည်ဆောက်လိုသော မြေကွက်ပိုင်ရှင်များ၊
(Hotel, Inn) လုပ်ငန်းစီးပွားရေး လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာ၊ Condo, Hotel, Office, Tower တည်ဆောက်လိုသူ၊ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံလိုသူ (Developer) များ၊ မြေရှိ၏ ၊ ငွေအရင်းအနှီးမရှိသူမြေရှင်များ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ တယ်လီဖုန်းလေး (Ph) တစ်ချက်သာဆက်လိုက်ပါ။ အမြန်ဆုံးပြီးမြောက်အောင် အကျိုးဆောင်ပေးပါမည်။ Universe (အနှိုင်းမဲ့) Construction.
(၁) ရန်ကုန်မြို့နယ်စုံ၊ လမ်းမတန်း (ပေ ၅၀ လမ်းပေါ်ပိုစိတ်ဝင်စားသည်) ကန်ထရိုက်ဆောက်လုပ်မည့် မြေရှင်များ အမြန်ဆက်သွယ်ကြပါ။ Developer (ငွေရှင်များ) ရှိသည်။
(၂) Hotel ဆောက်ရန်မြေ (50x50) သို့ (ဧကမြေကျယ်ကျယ်၊ လမ်းကျယ်) ၀ယ်မည်။
Hotel လုပ်ရန် အဆောက်အအုံ Hotel လုပ်ငန်းငှားမည်/ ၀ယ်မည်။ ပိုင်ရှင်များ အမြန်ဆက်သွယ်ရန်။
(၃) မြိုင်ဟေ၀န်လုံးချင်းအိမ်ရာ၊ မြေ (သို့) လုံးချင်းဝယ်မည်။
(၄) မရမ်းကုန်း၊ ၇ မိုင်၊ မောင်ဝိတ်အိမ်ရာ မြေ (သို့) လုံးချင်းဝယ်မည်။
(၅) ကွန်ဒိုဆောက်မည့်မြေနေရာ အနည်းဆုံး(20000 sqft) Location
( ပြည်လမ်း၊ ၅- ၈ မိုင်အတွင်း။) ရန်ကင်း၊ ဆရာစံလမ်း Foreign Co., Ltd. Developer
(လမ်းအကျယ်အနည်းဆုံး ပေ (၅၀) ရှိရမည်။ မြေကျယ်ကျယ် ပိုစိတ်ဝင်စားသည်။
(၁) တောင်ဥက္ကလာ၊ ဗဟိုဈေး (5.28 ဧက) ဂရံမြေ အရောင်းများ 205000 L
(၂) ညောင်ဦးပုဂံဟိုတယ် (2 ဧက) ဘန်ဂလို (43) လုံး လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေ 60000 L
(၃) ညောင်ဦးပုဂံဟိုတယ် (38400 Sqft) 2RC,12M+ ဘန်ဂလို(11) လုံး 35000 L
(၄) မန္တလေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် (18 ဧက) ဂရံမြေ 1ဧက 15000 L
(၅) မရမ်းကုန်းသလ္လာဝတီလမ်း၊ (70x90) (3 RC 40x45) ရေမီးပါဝါဂရန် 13000 L
(၆) တောင်ဥက္ကလာ၊ ပဒေသာရုပ်ရှင်ရုံလမ်း (240x270) ဂရံမြေ 13000 L
(၇) ပုသိမ်၊ ချောင်းသာဟိုတယ်ဇုံ၊ လမ်းမတန်း (100x100)2ကွက် (80x80) ပေါင်း 6000 L
(၈) မရမ်းကုန်း၊ ရွှေနှင်းဆီလမ်းဆုံး (စွယ်တော်စေတီနား)၊(၅)ရပ်ကွက် (40x60)2BN-3200 L
(၉) လှိုင်သာယာ၊ O- Block၊ သစ်ခွလမ်း၊ (60x80) 2RC အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး 3100 L
(၁၀) မောင်ခိုင်လမ်း(လယ်) (33x66) 4F, M+3B,AC,Ph,Lift အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး 2500 L
(၁၁) လမ်းမတော်၊ ၁၂ လမ်း(၁၀၀) 25x50 ၅ လွှာ (4F), 3BR,AC,Ph,Kor,ပါကေး 750 L
(၁၂) ချောင်းသာ၊ ရွှေသောင်ယံသွားလမ်းမပေါ်၊ ၉ မိုင် (13 ဧက) ရော်ဘာခြံ 600 L
(၁၃) တာမွေ၊ ဓမ္မဒါနလမ်း (12½x50) GF, ပါကေး၊ BR 500 L
(၁၄) ကျောက်တံတား၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (8x14) လှေခါးကွင်၊ ထပ်ခိုး၊ ရေမီး၊ Ac 500 L
(၁၅) တာမွေ၊ ကျားကွက်သစ်လမ်း (15x60) 4F, ကျွန်းပါကေး၊ 2BR, လမ်းကျယ် 450 L
(၁၆) မရမ်းကုန်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံရှေ့၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းသွယ် (12½x15x50)အလွှာစုံ150-450 L
(၁၇) ဒလ၊ ဓနုတ်ဘုရားသွားကတ္တရာလမ်းမပေါ် R,RG, မြေ 1 ဧက 120-450 L
(၁၈) မေတ္တာညွန့်၊ ကမ္မဌာန်းလမ်း 15x55 1F, ပြင်ဆင်ပြီး 380 L
(၁၉) တာမွေ၊ က၀ိပုညလမ်း 15x50 GF ၊ ကြွေခင်းကပ်၊ ရေမီး 370 L
(၂၀) တာမွေ၊ သြဘာလမ်း 15x60 3F,BR, ပါကေးခင်း 370 L
(၂၁) ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုကြိုးတံတားလမ်းမပေါ် R,RG,မြေ 1ဧက 250 L
(၂၂) အရှေ့ဒဂုံ၊ လေးဒေါင့်ကန်ရွာနား (80x120) အိုးအိမ်စလစ် 85 L
(၂၃) ရမည်းသင်း၊ ရွှေလုပ်ကွက် (ဧက 50) (လိုသလောက်ခွဲယူနိုင်သည်)1 ဧက 50 L
(၁) ရန်ကင်း၊ အောင်ဇေယျလမ်းမ (100x50) 2½RC, ပါဝါ၊ ရေ (လုပ်ငန်းစုံ) 70 L
(၂) လသာ၊ မဟာဗန္ဓုလ(စဉ့်အိုးတန်းထိပ်) (60x50) Condo, 11F,M+2B,F.F(FOR.) 40 L
(၃) ဘောက်ထော်၊ အနီဃာလမ်း (35x60) 2RC,2BR,AC,Ph 15 L
(၄) ကတတ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း (12½x60) 1F, လျှာထိုးခင်း၊ 2BR,ပြင်ဆင်ပြီး 3.5 L
လမ်းမတော်၊ လသာ၊ အလုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချေုာင်း အလွှာစုံ လုံးချင်း အ၀ယ်၊ အငှား ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်များ ဆက်သွယ်ပါ။
Posted by ygn house at 2:46 AM
ရခိုင်ပြင်ခံအင်္ကျီဝယ်လိုပါက
ARAKAN REVIEW NEWS
ကချင် နေ့စဉ် သတင်း
ထက်အောင်သျှိုင်း အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
ထက်အောင်သျှိုင်း အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(ရန်ကုန်) မြန်မာပြည်အနှံ့ အဝေးပြေးကားနှင့် ဘုရားဖူး၊ ကမ်းခြေလက်မှတ်...
ရွှေနိုင်လင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
ဖုန်း - 09731 30338 - 0951 99367 - 0950 34345 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လုံးချင်း၊ မြေကွက်၊ ဂိုဒေါင် 1 ။ ကျောက်တံတား၊ဘားလမ်...
အောင်ပြည့်ဖြိုး အိမ်၊ခြံ၊မြေအကျိုးဆောင် (ရန်ကုန်)
အောင်ပြည့်ဖြိုး အိမ်၊ခြံ၊မြေအကျိုးဆောင် ဖုန်း-09 731 63863, 09 421042022, 09 4210 59325 တိုက်ခန်း (အရောင်း) ၁။ ဘူတာရုံ...
Winner Strength အိမ်ခြံမြေ နှင့် အထွေထွေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
Winner Strength General Service Co., Ltd အိမ်ခြံမြေ နှင့် အထွေထွေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်) အမှတ် ( ၈၅ ) ပထမထပ် - ၀ဲ - သုခလမ်း...
ပန်းသော်တာ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း( ရန်ကုန် )
ပန်းသော်တာ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း( ရန်ကုန် ) ဖုန်း = 09420 76256 – 0950 55522 သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ရောင်းမည် ၁) ဗိုလ်ချိ...
( LUCKY JOINT ) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
( LUCKY JOINT ) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်) ဥပဒေ အကြံပေးနှင့် စာချုပ်စာတမ်း ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဖုန်း = 09732 36622 - 0973...
ရွှေအိမ်စည် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ဖုန်း အထွေထွေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း (ရန်ကုန်)
ရွှေအိမ်စည် အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ဖုန်း အထွေထွေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း (ရန်ကုန်) အမှတ်(၆၇)ကျောင်းလမ်း၊အလုံမြို့နယ် ၊ ဖုန်း 09-7315719...
ဟိုဟိုးကျော် အိမ်ခြံ၊မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
ဟိုဟိုးကျော် အိမ်ခြံ၊မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်) အမှတ်(၁၄)မြကန်သာအိမ်ရာ ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း= 09421 109172 – 0942...
အောင်တံခွန် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်)
အောင်တံခွန် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း(ရန်ကုန်) အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စနှင့် ပက်သက်လာလျှင် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ ဖုန်း= 095...
သီရိမင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်(ရန်ကုန်)
အမှတ(၂၃၁)ပထမထပ်၊အနော်ရထာလမ်း၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ဖုန်း= 09731 34109 – 09420 122081 1. ပုဇွန်တောင်လမ်း ၅၀ (တိုက်ခ...
2013-ygnhouse.blogspot..com. Picture Window theme. Theme images by piskunov. Powered by Blogger.